I-Fuyang Bestop Import And Export Ltd. isungulwa ngonyaka we-2011 ngeminyaka engaphezu kwengu-10 ithumela okuhlangenwe nakho. Singumqalisi wokusebenza ngamakhambi aseChina asebenzisana ne-esp ngokukhipha umuthi wendabuko emhlabeni wonke. ...
IScorpion ingeyomuthi wePinggan Xifeng, onambitheka ngokunambitheka, uyisicaba ngokwemvelo, unobuthi futhi ungowesibindi se-meridian. Kunomphumela wokususa umoya ne-spasm, ukwemba izigaxa nokuqeda izinhlungu, ukuhlasela ubuthi nokuhlakaza ifindo. Scorpion kuyinto impor ...
I-Tangerine isithelo esijwayelekile empilweni yansuku zonke, abantu bahlala bathanda ukunambitheka kwayo okumnandi nokubukeka okukhanyayo, kepha sihlala silahla ama-peels ngemuva kokukujabulela. Eqinisweni, kungudoti, lapha ake ngethule imiphumela emangazayo yensimbi ye-tangerine. Ama-tangerine peels angagcinwa ...